Wariye Abwaan Cabdala Nuurdiin Axmed – The official Somali Historical
Weriyeyaal iyo Fanaaniin ka hadlay taariikhda Cabdalla Nuuradiin Axmed Fanaanka weyn ee Cumar Shooli ayaa tacsi u diray eheladii iyo qaraabadii uu ka tegay Abwaan Cabdalla Nuuradiin Axmed,wuxuuna Cumar Shooli xusay in Ustaad Cabdalla uu ka dhignaa qabiir ku xeeldheer,dhinacyada Diinta,Hal abuurka Suugaanta iyo Saxaafadda.
Heesaha aan qaado intooda badan Abwaan Cabdalla ayaa hal abuuray,
DOOQAGU WUXUU RABO KOLAAN DEYNBA KUU GALO WELI DIIDAY KUMA ORAN,NAFYAHEEY WADAAD IYO WELIGII LA SHEEGABA,ayaa ka mida heesaha uu sameeyay”ayuu yiri Shooli.
Al-Fanaan Shamaali Axmed Shamaali oo isagana fanka dhawaan ka fariistay ayaa tacsi u diray Marxuum Cabdalla Nuuradiin Axmed,wuxuuna sheegay inuu soo bixitaankiisii fanka gacan weyn ku lahaa.
Ustaad Cabdallah waxaan leeyahay allaha u naxariisto,heesaha uu sameeyay ee aan soo qaaday waxaa ka mida,Fadumooy Jaceylkaan,Amran waxay ku nooshahay agagaarka ceelgaab iyo lix hees oo kale”ayuu yiri Shamaali oo ka gaabsanayay ka sheekeynta fanka ama xasuustiisii faneed.
Fanaanada weyn ee codkeeda aadka loo jecel yahay Raxmo Ruuxi,dadkana ay kala garan waayeen codkeeda iyo kii boqoradii Codka Xaliimo Khaliif Magool ayaa tacsi tiiraanyo leh u dirtay Marxuum Cabdalla Nuuradiin waxayna Nuuradiin ku sifeeysay hal abuure,xasuus ku leh bahda Fanka iyo Saxaafadda Soomaaliyeed.
Fartuun Axmed Fergenli(Birimo) iyo Saciido Cali (Shiino) ayaa tacsi gaara u diray dhamaan fanaaniinta iyo Saxaafadda Soomaaliya waxayna Cabdalla Nuuradiin ilaah uga baryeen Janatu Fardowsa.
Hal abuurka Cabdalla Nuuradiin aad ayaan u jeclaa,waxaana ugu jeclahay hees uu qaadi jiray allaha u naxariistee Beer dilaacshe,waa heesta,Ruux dhimasho joogaa,ileen looma dheeloo,dhaanta looma celiyee” ayey tiri Fanaanada Saciido Shiino oo la hadleysay Warbaahinta Waagacusub.
Heesaha Cabdalla Nuuradiin uu hal abuuray oo dhan waan jeclaa laakiin aniga waxaan si gaara u xiiseeyaa heesaha uu qaadi jiray Cabduqadir Sanka sida Markey socoto laafyaha sinta kama dhaqaaqdo,Sahro Ceeblaay,Xaasidkana dheg hoow dhigin,waa xumaato badanyee”ayey tiri Fartuun Birimo oo la hadashay Warbaahinta Waagacusub.
Cabdalla Nuuradiin waxaan u aqaanay hal abuure ku xeeldheer arrimaha bulshada iyo Diinta,waxaan xasuusteyda ka go’ayn sheeko uu qoray 1994 oo la magac baxday ANIGA IYO JACEYL? “Maxaa tii aan maagaba loo mehersadaa” waxay ahayd qiso dhaba oo ku dhacday,hade kaalintiisii Saxaafadana aad ayaa loo xasuustaa”sidaas waxaa yiri Gudoomiyaha Ururka isu taga Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ASOJ Dahir Abdulle Alasow oo tacsi heer Qaran u diray dhamaan,Bahda Fanka,Saxaafadda iyo ehelada iyo qaraabadii uu ka tegay.
Marxuum Cabdalla Nuuradiin Axmed waxaa lagu xasuustaa xiriirintiisii tiyaatarka qaranka,wuxuuna ka dhignaa Aftahan balaaqadiisa dhan walba ay ku wanaagsan tahay.
Ustaad Cabdalla waxaa lagu dhaawaqay Muqdisho sanadkii 2004 waxaana kadib wajahay xanuun dhiig kar lagu sheegay oo baarleys ka dhigay.
Taageerayaal badan oo dhageystayaala ayuu Cabdalla ku lahaa Soomaalida dhexdeeda waxaana aad loo jeclaa barnaamijyadda uu ka qabto telefishinka iyo Idaacadda Horn Afrik.
Rag la yaabay balaaqada Cabdalla Nuuradiin ayaa hada ka hor waxay ka shaqeeyeen inuu jimca walba Masjid ku yiil degaanka shibis ka akhriyo khudbada Jimcaha.
Luqada Carabiga ayuu aad u yaqiin,wuxuuna inta badan gabayadiisa ku tirin jiray af carabi,isagoo kadibna u bedeli jiray af somali.
Warbaahinta Horn Afrik wuxuu Marxuum Cabdalla u sameeyay iidhehdii ugu suuq geynta wacneed tan iyo markii la furay,waxaana iidhehdaas uu ku cabiray ganacsiga iyo doorka ay horn Afrik ku leedahay.
XAGAAYGAAN,XAGAAYGII KA HOREEYAY,XERSI BAA KEENAY ALAAB,BAKHAARBUU KU XAREEYAY,XAGEE IYO KAM,CIDI WAY XUSI WEYDAY,XAASHI BAA LA TALSHOO,XAYEEYSIIN U SAMEE,AYAA XAALKII LAGU GOOYAY,HORN AFRIK BAA U XADREYSAY,XAFLAD WEYN U SAMEYSAY,XIDIGIGAAHAANA MARSIISAY.
Weriyeyaal iyo Fanaaniin ka hadlay taariikhda Cabdalla Nuuradiin Axmed Fanaanka weyn ee Cumar Shooli ayaa tacsi u diray eheladii iyo qaraabadii uu ka tegay Abwaan Cabdalla Nuuradiin Axmed,wuxuuna Cumar Shooli xusay in Ustaad Cabdalla uu ka dhignaa qabiir ku xeeldheer,dhinacyada Diinta,Hal abuurka Suugaanta iyo Saxaafadda. Heesaha aan qaado intooda badan Abwaan Cabdalla ayaa hal abuuray, DOOQAGU WUXUU RABO KOLAAN DEYNBA KUU GALO WELI DIIDAY KUMA ORAN,NAFYAHEEY WADAAD IYO WELIGII LA SHEEGABA,ayaa ka mida heesaha uu sameeyay”ayuu yiri Shooli. Al-Fanaan Shamaali Axmed Shamaali oo isagana fanka dhawaan ka fariistay ayaa tacsi u diray Marxuum Cabdalla Nuuradiin Axmed,wuxuuna sheegay inuu soo bixitaankiisii&hellip;
Previous: Axmed Maxamed Xaaji Daahir
Next: Wariye Abwaan Cabdala Nuurdiin Axmed oo Muqdisho ku geeriyooday
Ops no adblock!
Waxaad isticmaaleesaa barnaamij xereeyo xayeesiinta, ee lagu magacaabo Adblock fadlan barnaamijkaa webka ka fur, sidaa ayuu Mr somali ku shaqeeyaa sababtoo ah waxaa website keena waxaa maal galiya xayeesiinta taa oo inoo saamaxeeso in webka aan hormarino uuna ahaado mid jira aayatiinka soo socda Mahad sanid